आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि थ्रीस्टारलाई, सडेन डेथमा निर्णायक गोल – Arthik Awaj
आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि थ्रीस्टारलाई, सडेन डेथमा निर्णायक गोल
By आर्थिक आवाज २०७५ फाल्गुन १८ गते शनिबार १३:३५ मा प्रकाशित
पोखरा, १८ फागुन । लिगको दोश्रो स्थानमा रहेको थ्रीस्टार क्लबले पोखरामा शनिबार सम्पन्न आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ । नेपाली सेनाको त्रिभूवन आर्मी क्लवलाई सडेन डेथको शिकार बनाउँदै थ्रीस्टारले १७ औं संस्करणको उपाधि जितेको हो । थ्रीस्टारले आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि पाचौंपटक जितेको हो ।
शनिबार दिउँसो भएको थ्रीस्टार र त्रिभूवन आर्मी क्लव निर्धारित ९० मिनेटको समय १÷१ को बराबरीमा रोकिएका थिए । त्यसपछि थपिएको ३० मिनेट पनि १÷१ गोल भएपछि खेल २÷२ को बराबरी भएपछि खेल निर्णयका लागि पेनाल्टी सुटआउटको सहारा लिनु परेको थियो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा ४÷४ को बराबरी भएपछि खेल सडेन डेथमा पुगेको थियो । सडेन डेथमा त्रिभूवन आर्मी क्लवका विकास खवासले गोल गर्न नसकेपछि आर्मीले चौथो पटकपनि उपबिजेतामै चित्त बुझाउनु प¥यो । खवासले प्रहार गरेको बल थ्रीस्टारका गोलकिपर एलन न्यौपानेले रोकेका थिए । सडेन डेथमा थ्रीस्टारका मिक्छेन ताामङले गोल गरेका थिए ।
यसअघी पेनाल्टी सुटआउटमा थ्रीस्टारका रञ्जित धिमाल, रुपेश केसी, विक्रम लामा र अनन्त तामाङले गोल गरेका थिए । सुशील राईले प्रहार गरेको बल भने पोलमा लागेर फर्किएको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा आर्मीका दीपक तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की, सन्तोष तामाङ र विवेक बस्नेताले गोल गरेका थिए । आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुले प्रहार गरेको बल भने बिपक्षी गोलकिपर एलन न्यौपानेले रोकेका थिए । शनिबारको फाइनल खेलमा थ्रीस्टारका एलन न्यौपाने म्यान अफ दी म्याच घए ।
यसैबीच, आहा ! रारा गोल्डकपको सर्बोत्कृष्ट खेलाडी थ्रीस्टार क्लवका उत्कृष्ट स्ट्राइकरमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ, उत्कृष्ट मिडफिल्डरमा आर्मीकै सन्तोष तामाङ, उत्कृष्ट डिफेन्डरमा आर्मीकै विमल पाण्डे, उत्कृष्ट गोलकिपरमा थ्रीस्टारका एलन न्यौपाने, सर्बाधिक गोलकर्तामा थ्रीस्टारका अनिल गुरुङ, उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा थ्रीस्टारका मेघराज केसी र एपिएफ फेयर प्ले हुन सफल ए । उनीहरुलाई जनही २५ हजारसहित ट्रफी प्रदान गरियो ।
बिजेताहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।